Daawo MUUQAAL: Khasaarihii ugu Badnaa oo ka dhashay dagaalkii maanta kadhacay Gaalkacyo !! | kowtharmedia.com
Home MUUQAAL Daawo MUUQAAL: Khasaarihii ugu Badnaa oo ka dhashay dagaalkii maanta kadhacay Gaalkacyo !!
Daawo MUUQAAL: Khasaarihii ugu Badnaa oo ka dhashay dagaalkii maanta kadhacay Gaalkacyo !!
Nov 06, 2016MUUQAAL
Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa Dagaalkii ugu Xoogaan oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo, Kaasi oo dhexmaray Ciidamada Galmudug iyo Puntland.
In ka badan 25 qof ayaa ku dhimatay, in kabadan 80 kalena way dhaawacmeen dagaalka dhexmaray Labada dhinac, Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 25 qof dhintay 18 kamid ay yihiin askartii dagaalku dhexmaray, halka Iinta kalena ay yihiin dad rayid ah oo fiito uGu tagtay guryahooda.
Saraakiisha caafimaadku waxay kaloo sheegeen in cisbitaallada magaalada la soo gaarsiiyay 83 qof, Waxayna dagaaladan Imaanayaan Iyadoo dhawaan Hehiish aan midho dhalin ay gaadheen Madaxda Galmudug iyo Puntland hashiiskii horay ufashilmay badalkiisa ayaa Itoobiya laga sugayaa maadaama Itoobiya ay sheegtay in Galmudg gardarantahay waxayna hadalkaas ka sheegeen xarunta Baarlamanka Maamulka Putland waxay aheed maalmo yar ka hor Safiirka Itoobiya ufadhiya Garoowe markii uu dhahay sdaas.
Previous PostBuugyar oo kuqoran dukumiinti kusaabsan sida Soomaaliya leegu biirinaayo Itoobiiya iyo Kenya waxaana maagaliyay Yurub!! Next PostShirkad lagu magacaabo SHS oo lacago dheeraad ah ku soo rogtay dadka ka dhoofaya Garoonka Mudisho!!